ခင်မင်းဇော်: October 2009
နီကိုရဲ အတွက် ရေးတဲ့စာ
စာရေးဆရာ နီကိုရဲ ဆုံးတာကို မျက်နှာ စာမျက်နှာပေါ်မှာ မနော်ရေးမှ သိလိုက်ရတယ်။ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။ သူနဲ့ ပြန်ဆုံရဦးမယ်လို့ တွေးထားတာ။
တလောက ချင်းမိုင်ရောက်တုန်းကတောင် တူးတူးသာနဲ့ သူ့အကြောင်းပြောမိသေးတယ်။ သူ့စာအုပ်အသစ်မထွက်နိုင်တာ ထုတ်ဝေသူက ညစ်ပတ်ထားတဲ့အကြောင်းတွေ စုံစုံလင်လင်ပြောဖြစ်တယ်။ အနုပညာသမားကတော့ စီးပွားရေး ဘယ်သိပါ့မလဲလေ။ ကိုယ့်အပေါ်ကောင်းလှချည်လား ထင်ပြီး အဲဒီလူကို ပစ်ယုံတတ်ကြတယ် မဟုတ်လား။ ဒါနဲ့ပဲ သူ စိတ်ညစ်ခဲ့ရမယ်။ အနုပညာသမားမို့လဲ ပိုခံစားတတ်ခဲ့လိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။
သူနဲ့ ကျမကလဲ ဆုံတွေ့ခင်မင်ခဲ့ပုံက ရိုးပါတယ်။ စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးလုပ်တော့ လေထန်ကုန်းမှာ သူငယ်ချင်းခက်မာနဲ့ တူတူ သွားသွားထိုင်တတ်တယ်။ အဲဒီမှာ ခင်ခဲ့တာပဲ ၊ သူက ဗေဒင်တွက်တတ်တယ် လက္ခဏာကြည့်တတ်တယ်။ ဒီတော့ ပိုပြီး ခင်မင်ဖို့ လွယ်ကူတယ်။ လက်ကလေး ထိုးပေးပြီး အပျင်းပြေ ကြည့်နေကြတဲ့ အုပ်စုက ကျမတို့ခက်မာတို့ မေငြိမ်းတို့ပေါ့။ အဲဒီ ၉၅ နှစ်ကုန်ပိုင်း ၉၆ နှစ်စ ပိုင်းတွေမှာ တနင်္လာသမီးများဖြစ်ကြတဲ့ မေငြိမ်း၊ ခက်မာ၊ မိုချာ့၊ မိုးချိုသင်း၊ ကေသီ ၊ ကျမ ဆိုတဲ့ ခင်မင်းဇော်တို့ ကျားမတွေ ဆုံတွေ့ပြီး မခွဲပဲ တတွဲတွဲ ရှိခဲ့ဖူးတဲ့ရက်စွဲတွေပေါ့။
ဗွီဒီယို ကင်မရာတလုံးနဲ့ ရန်ကုန်မြို့လည်မှာ လျှောက်သွားနေတဲ့ ကျမနောက်ကို ကင်မရာအိတ်ထမ်းပြီး မကြည် ဟိုလူတွေ ရိုက်ပါလား။ ဒီရှုခင်းမိုက်တယ် ရိုက်ရိုက်ဆိုပြီး မြှောက်ပေးတတ်တာ နာမည်ကျော် စာရေးဆရာ မဖြစ်သေးတဲ့ စာရေးဆရာပေါက်စ နီကိုရဲခေါ် ကိုရဲပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအချိန်ကတည်းက သူ့စာတွေက မဂ္ဂဇင်းတွေမှာတော့ နာမည်ထွက်နေပြီ။ ကြည်ပြာရောင်နဂ္ဂတစ်များထဲက မသီတာကို နာမည်ပြောင်းပေးရတဲ့အချိန်လဲ ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။
သူနဲ့ ကျမက ညနေစောပိုင်းတွေမှာ ကျမအလုပ်လုပ်တဲ့ ၃၇လမ်းထဲက ရုံးခန်းမှာ သူ့ကိုစောင့်ပြီး သူရောက်တာနဲ့ ကြည့်မြင်တိုင် ညဈေးဘက်တွေ။ တခါတလေ ဗိုလ်တထောင်ဘုရားဘက်တွေ ။ ဘယ်မှ သိပ်မသွားချင်ရင် ဆူးလေဘုရားလမ်းနဲ့အနော်ရထားလမ်း အနီးအနားက ပလက်ဖောင်း တောက်လျှောက်ရောင်းနေတဲ့ ဆိုင်တွေမှာ ဈေးရောင်းဈေးဝယ် စည်ကားနေတာမျိုးတွေကို လိုက် လိုက်ရိုက်ရတယ်။ ကျမအဲဒီတုန်းက ကိုင်တဲ့ ဗွီဒီယိုကင်မရာကလဲ ခုလိုသေးသေးလေးတွေမဟုတ်ပါဘူး။ ပုခုံးမှာထမ်းရတယ် ၊ နောက်ခုလို မော်နီတာသေးသေးလေး မပါတဲ့ မျက်လုံးနဲ့ ကြည့်ရတဲ့ ကင်မရာအကြီး။ ဒီတော့ ရိုက်စရာ ရှိတာ ရိုက်ပြီးရင် သူက ပေးအမ ကျနော့်ကိုပေးဆိုပြီး ကိုင်ပေးထားတာပဲ။ သူရိုက်စေချင်တဲ့ မြင်ကွင်းတွေဆို အမ ရိုက် ရိုက်ဆိုပြီး အတင်းခေါ်တော့တာ။
ကျမတို့ ပလက်ဖောင်းဈေးသည်တွေကို ပထမဆုံး ရိုက်တုန်းက ထင်တယ်။ ဈေးသည်တွေက ပစ္စည်းတွေသိမ်းပြီး ပြေးမယ်လုပ်လို့ ။ မနည်းလိုက်ဆွဲရတယ်။ ကျမတို့ အပျော်ရိုက်တာပါ ။ အရိုက်ကျင့်နေတာပါဆိုပြီး တောင်းပန်ရှင်းပြ လုပ်ရတယ်။ ဘာလို့ ထွက်ပြေးတာလဲ ပြောတော့ စည်ပင်က လာရိုက်တာ မှတ်လို့တဲ့။
နီကိုရဲ ဆီမှာ ထူးခြားတဲ့ လက်ချောင်းလေးတွေ ရှိတယ်။ ကျမ မြင်ဖူးသမျှလက်ချောင်းတွေဟာ အရင်းကြီးမယ် အဖျားရှုးရှုးသွယ်သွယ် ၊ ဒါမှမဟုတ် လေးထောင့်လက် စသဖြင့် ရှိပေမယ့် သူ့လက်ကတော့ အရင်းက သေးပြီး အဖျားပိုင်း ပထမဆစ်က ကြီးနေတယ်။ ကျမက သူ့လက်ကို ပြန်ကြည့်ပြီး နင်က ဒီလက်ကြောင့် ဒါ့ထက်နာမည်ကြီးတဲ့ စာရေးဆရာ ဖြစ်မယ်လို့တောင် ပြန်နောက်ခဲ့သေးတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ကျမ အိမ်ထောင်ကျပြီး လွိုင်ကော်ဖက်ရောက် ... နောက် စာပေနယ်က အားလုံးနဲ့ အဆက်ပြတ်သလောက်ဖြစ်နေတဲ့ အချိန်ပိုင်းမှာ ခက်မာက ပုသိမ်အိမ်ကိုလာလည်တယ်။ အိမ်မှာအိပ်ခါနီး ညဘက်ကျတော့ သတိတရ ဘယ်သူရှိသေးလား သူဘာလုပ်နေလဲ လျှောက်မေးနေတုန်း ခက်မာက ဗြုန်းကနဲ အမ နီကိုရဲဆီ ဖုန်းဆက်မလား သူ့ဟန်းဖုန်းနံပါတ် ကျမဆီမှာ ရှိတယ်တဲ့။ အေး ဆက်ကြည်ရအောင် ဆိုပြီး ဖုန်းဆက်စကားပြောဖြစ်သေးတယ်။ အမ ပုသိမ်ပြန်ရောက်နေသလား။ ကလေး ဘယ်အရွယ်ရောက်နေပြီလဲ။ အကိုရော ဘယ်မှာလဲ မေးခွန်းတွေချည်း မေးဖြစ်ကြတယ်။ အေး ဒီတခါ ရန်ကုန်လာရင် လေထန်ကုန်းကို လာလည်ဦးမယ်ဆိုတော့ လေထန်ကုန်းက သိပ်မစည်တော့ဘူး အမရဲ့။ ခု ဂျက်ကာ တခုပြောင်းထိုင်တယ် တဲ့။
နောက်ပိုင်း ရန်ကုန်ရောက်ပေမယ့် မဆုံဖြစ်ခဲ့ဘူး။ လေထန်ကုန်းမဟုတ်ပဲ ပိုအဆင့်မြင့်တဲ့ အင်းဝ စာအုပ်ဆိုင်နားက နာမည်မေ့နေတဲ့ ကော်ဖီဆိုင်မှာပဲ ဆုံဖြစ်ကြတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာတော့ ကလေးအမေတွေဖြစ်နေတော့ အရင်ကလို တမေ့တမော မထိုင်ဖြစ်ကြတော့ဘူး။
မတွေဖြစ်တာ ကြာပေမယ့် မှတ်မှတ်ရရ ဒီလဆန်းပိုင်းကပဲ သူ့အကြောင်းကို သတိတရပြောဖြစ်ပြီး ခုတော့ သူဆုံးပြီတဲ့။ အနုပညာသမားတွေမှာ ကိုယ်မှန်နေတာကိုတောင် စီးပွားရေးသမားရဲ့ ချုပ်ကိုင်မှုထဲက ရုန်းထွက်ဖို့ ငွေကြေးမတတ်နိုင်ခဲ့လို့ ရေးထားခဲ့တဲ့ ၀တ္ထုတွေ မထုတ်နိုင်ပဲ ပရိသတ်နဲ့ အဆက်အသွယ်ပြတ်၊ စိတ်ဓါတ်တွေ ကျဆင်း အဲလိုဖြစ်ခဲ့လေသလားလို့ တွေးရင်း စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရတယ်။ အဲဒီအကြောင်းတရားတွေက သူ့ကို အသက်တိုစေတာဖြစ်မှာပဲ။
ပျော်စရာတွေ အရေးကောင်းခဲ့တဲ့ နီကိုရဲ ဆိုတဲ့ ရိုးသားတဲ့ ကိုရဲဝင်း တယောက် ကောင်းရာသုဂတိ ရောက်ရှိပါစေလို့ပဲ အမ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
ဗွီဒီယို ကင်မရာ ကိုင်တိုင်း သတိရနေဆဲပါ။
Posted by ခင်မင်းဇော် at 12:16 AM
ဘလော်ဂါတွေလဲ ခုတလော စားစရာတွေချည်း တင်နေတယ်။ သူတို့ ၀ါးတီးတွေကို သူများ သားရည်ကျအောင် ရက်စက်လွန်းကြတယ်။ ဒီတော့ ဟိုတုန်းက စားခဲ့တာလေးတွေထဲက ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့ သတိရပြီး ရိုက်မိတာလေးတွေ တင်ပေးလိုက်တယ်။(စားစရာတွေကို စားရတော့မယ် ဆိုတာနဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့ အမြဲပဲ မေ့ပြီး ကုန်ခါနီးမှ သတိရတတ်လွန်းလို့ပါ)။ ၀ဋ်လိုက်ကြပါကုန်။
ဒါက အော်စလို တရုပ်ဆိုင်က ခေါက်ဆွဲပြုတ်နဲ့ ဘဲကင်
ဒါက အော်စလိုက ပေါ်တူဂီ ထမင်းပဲ သူက ထောပတ်ထမင်းနဲ့ တူတယ၊် ပဲဟင်းကို ပျစ်ပျစ်ချက်ပြီး အနီရောင်ဆိုးထားတယ်၊ သိုးသားနဲ့ စားခဲ့တယ်
ဒါကတော့ အော်စလိုမှာ ရောင်းတဲ့ ဂျပန်ဆူရှီ
ဒါက ဆွီဒင်ရိုးရာအစားအစာ၊ အားလူမီးဖုတ် ၀က်သားကင် ၊ ပြောင်းဆန်
ဆွီဒင်မှာ စားရတဲ့ အားလူးကိုခြေပြီးကြော်ထားတာနဲ့ ၀က်ပေါင်ခြောက်
ဘာတွေ ဘယ်လိုပဲ ဈေးကြီးကြီး ၊ ကိုယ့်ဖာသာချက်တဲ့ သီးစုံချဉ်ရည်ဟင်းလေးလောက် ဘယ်ဟင်းက ကောင်းမလဲ။ ငါးဖယ်ငါးဆုပ်၊ ဒန့်သလွန်သီး၊ ရုံးပတီသီး၊ ပန်းဂေါ်ဖီ၊ အာလူး၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊( လက်ကျန်ပေါင်းစုဟင်း)
ဒါက ဘလော်ဂါ တူးတူးသာ အိမ်ကိုလာလည်တုန်းက လုပ်စားတဲ့အသုတ်စုံ
၀က်ခြေထောက်စွပ်ပြုတ်၊ အစိမ်းကြော်၊ငပိချက်၊ သရက်သီးတို့စရာ
ကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ယာက ထမင်းနဲ့ဟင်းသာ စားလို့အကောင်းဆုံး
Posted by ခင်မင်းဇော် at 9:15 PM
ဘ၀ဒိုင်ယာရီ အပိုင်း ၂ ၊ အခန်း ၁၂
ထောင်ဆိုတာ နေတတ်ရင် အကျယ်ကြီးပါလို့ ပြောတတ်တဲ့ ထောင်ထဲဝင်လိုက် ထွက်လိုက်သူတွေရဲ့ စကားတွေလိုပါပဲ။ ထောင်ထဲကို သီးသန့် အကျဉ်းသူ ဆိုပြီး နိုင်ငံရေးမှုနဲ့ ၀င်လာတဲ့ အမျိုးသမီးတွေက ၁၉၈၈ နောက်ပိုင်းမှာ ရှိလာသလို ၀င်လာသမျှကလဲ တက္ကသိုလ်ကောလိပ် ကျောင်းသူတွေ များနေတော့ သိပ်ကြမ်းတဲ့ ထောင်ဝါဒါမတွေလဲ နည်းနည်းတော့ ရှိန်ကြတယ်။ သူတို့တွေက အစပိုင်းမှာ သာမန်ရာဇ၀တ်မှုသည်တွေလို ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဆက်ဆံခဲ့ပေမယ့် ခြောက်လဲ မကြောက် ၊မြှောက်လဲ မမြောက်တဲ့ သူတွေဆိုတာ သိလာတော့ ပုံမှန်ဆက်ဆံလာကြတယ်။ နောက် အကြံဥာဏ်ကောင်းတွေ သူတို့ မသိတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ပြောပြနိုင် ပေးနိုင်တယ် ဆိုတာ လက်တွေ့ သိလာတော့ ဆက်ဆံရေးက ထင်သလောက်မဆိုးတော့ဘူး။ နေတတ်ရင် ကျယ်လာတဲ့ သဘောပဲ ထင်ပါရဲ့။
အပြင်မှာ သူတို့ မေးခွင့်မကြုံတဲ့ ၈လေးလုံးတုန်းက ရန်ကုန်က အဖြစ်အပျက်တွေ၊ ဘုန်းမော် သေနတ်ပစ်ခံရတဲ့နေ့ကအခြေအနေတွေ၊ ရေဒီယိုက သတင်းမှာ တလွဲကျေညာတော့ ဒေါသထွက်ကြရတာတွေ စုံနေတာပါပဲ။ ဒါ့အပြင် တက္ကသိုလ်ကောလိပ်တွေက မြို့အလိုက်ဖွဲ့ထားတဲ့ အဖွဲ့တွေရဲ့ အပျော်ခရီးစဉ်တွေကို စီကာပတ်ကုံးနားထောင်ချင်လို့ ခဏခဏ ပြန်ပြောပြကြရတယ်။ အဲဒီပစ်ကနစ်မှာ ကစားတဲ့ နည်းတွေကိုလဲ သင်ပေးရသေးတယ်။ ကျမက ဂိမ်းမာစတာ လုပ်ခဲ့ဖူးတယ်လို့ တယောက်က သွားထောင်လို့ သူတို့ကို ကစားနည်းတွေ ရေးပေးပါ တဲ့ ။ ဟဲ့ နင်တို့ကဘယ်မှာ သွားဆော့မှာတုန်း လို့ ခပ်ရိရိ မေးတော့ တချိန်ချိန်ပေါ့တဲ့ သူတို့ကလဲ အားကျမခံ။
တချို့ ထောင်မှုးအဆင့်တွေက ဒီမိုကရေစီလူထု လှုပ်ရှားမှုကို ထောက်ခံတယ်။ သူတို့ သိချင်တဲ့ အချက်တွေ ကျောင်းသား လှုပ်ရှားမှုတွေကို လာလာမေးပြီး လာနားထောင် တတ်တယ်။ အစက ကိုယ်ကလဲ ပြောရမလား မပြောရဘူးလား ဇဝေဇ၀ါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်လဲ ထောင်ထဲ ရောက်နေပြီပဲ ။ ရသလောက်ပြောမယ် စည်းရုံးမယ်ဆိုတဲ့ အတွေးတွေနဲ့ပြောပြဖြစ်တော့တယ်။
ထောင်ဝန်ထမ်းတွေထဲမှာ ကောင်းတဲ့လူလဲ ရှိတယ်ဆိုတာ ပိုပြီးသဘောပေါက်လာတယ်။ ဒီလိုပဲ နယ်မြေတိုင်းမှာ လူကောင်းလူဆိုး ရှိနေတာပဲ ဆိုတာမျိုးကို လက်တွေ့ သိလာတယ်လို့ ပြောရမယ်။
ဘာ့ကြောင့်ဆို ကိုယ့်လိုပဲ အကျဉ်းကျနေတဲ့ လူတွေထဲကပဲ ဒီအဖွဲ့ကစည်းလုံးတော့ ဖြိုခွဲချင်စိတ်နဲ့ သွေးခွဲစကားတွေကို ဆိုတာတွေ လဲ ကြုံလာရတယ်။ အသေးအဖွဲလေးတွေကို တနေ့နည်းနည်းလာပြောတာမျိုးပေါ့။ ကျမကိုခဏခဏ လာအပြောဆုံးက ရိက္ခာကိုင်တာကို ကျမတို့အဖွဲ့ထဲမှာ အငယ်ဆုံးကို ပေးထားတယ်။ အဲဒီတယောက်က ၀က်အူချောင်းတွေကို ဘယ်လိုယူစားတယ် ဘယ်မုန့်ကို ဘယ်လို်ခိုးစားတယ် ဘယ်သူက ဘယ်သူနဲ့ဘာတွေ ပြောနေတယ် စသဖြင့်ပေါ့။ ဘာပဲပြောပြော လာပြောတဲ့လူကို ကျမတို့က အကုန်စွန့်နိုင်လို့ နိုင်ငံရေး လုပ်တာလို့ ဒီတော့ အစားတလုပ်အတွက် စကားတခွန်းအတွက် ဘာမှ နောက်ဆံမတင်းဘူးလို့ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ပြန်ပြောပစ်လိုက်တယ်။
ကျမကို ပြောသလိုပဲ နောက်လူတွေကိုလဲ အဲလိုပြောတာတွေ ရှိတယ်။ ကျမတို့ အချင်းချင်း ပြန်ပြောဖြစ်ကြတယ်။ ထောင်ထဲမှာ နေတဲ့ တလျှောက်လုံး အဲလို အစားအသောက်ကိစ္စတွေနဲ့ စကားများတာ တခါမှမဖြစ်ခဲ့ဖူးဘူး။
နောက်ပြီး ခုချိန်ထိ ပြန်သတိရတဲ့အထဲမှာ ထောင်ထဲက ဖုန်းမော်နေ့လိုမျိုး ။ ၈လေးလုံးနေ့တွေ အာဇာနည်နေ့တွေလိုမျိ်ုး အထိမ်းအမှတ်နေ့တွေမှာ ရှိတဲ့လူလေးနဲ့ မိန်းမထောင်ရဲ့ ထောင့်တခုခုမှာ အားလုံးငြိမ်သက် ၈ စက္ကန့်တို့ ၊ အားလုံးအလေးပြုတို့ ခိုးလုပ်ကြရတာလေးတွေပါပဲ။ အဲဒီလို အခမ်းအနားမျိုးကို လုံးဝ လုပ်ခွင့်မပြုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မရရအောင်ခိုးလုပ်ကြရတယ်။ တခါတလေ မနက်အစောကြီး ထလုပ်ကြတယ်။ တခန်းနဲ့တခန်း အချက်ပြအသံပေးပြီး တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာ ရပ်နေတာမျိုးကို သေချာ လုပ်ကြတယ်။ မနက်စောစောမလွယ်ရင် နေ့လည်ဘက် ဒါမှမဟုတ် ညနေ တန်းပိတ်ခါနီး အဲလိုပဲ အခြေအနေပေါ် မူတည်ပြီး လုပ်ကြတာပဲ။ နောက် အဲဒီနေ့ နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အမှတ်ရစရာ စကားတွေ ပြောကြတယ်။ အဲဒီကနေ ရှေ့ဆက်ဘာတွေ လုပ်ချင်တယ် စသဖြင့် ဆွေးနွေးကြ ငြင်းခုန်ကြနဲ့ အခမ်းအနားကို အသက်ဝင်အောင် ကြိုးစားကြတာပဲ။
အဲဒီလိုမျိုးတွေ လုပ်လာရတော့ အပြင်မှာ လဲ အဲလိုနေ့တွေမှာ ကိုယ့်အချင်းချင်း တိတ်တဆိတ်ဆက်သွယ် လုပ်တဲ့ အကျင့်ပါလာတယ်။ ဘယ်လို အခြေအနေဖြစ်ဖြစ် အပြင်ရောက်တော့လဲ လူစုံနိုင်သမျှ ဆုံပြီး လဘက်ရည်ဆိုင်လို အအေးဆိုင်လိုမျိုးမှာ ခဏဖြစ်ဖြစ် ထိုင်ပြီး ၈ စက္ကန့် တိတ်ဆိတ်နေတာမျိုးကို လုပ်ခဲ့ကြတယ်။ အပြင်က ကြည့်ရင်တော့ ဘာမှမဟုတ်ဘူးပေါ့။ ဒါပေမယ့် အဲလို သတိတရ လုပ်ဖြစ်တာကိုပဲ စိတ်ထဲမှာ ကျေနပ်နေမိကြတယ်။
ဒီလွတ်မြောက်နယ်မြေမှာ တချို့နေ့တွေကို အလေးအမြတ်ပြုတာ မတွေ့ရတော့ စိတ်ထဲမကောင်းဘူး။ လုံခြုံရေးကြောင့် ငွေရေးကြေးရေးကြောင့် ဆိုတာတွေ သိလာရတော့ ထောင်ထဲမှာနဲ့ ထောင်ပြင်ရောက်တုန်းက လုပ်ခဲ့ရတဲ့ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ကလေးကို သိပ်သတိရတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ထောင်သက် ၂ နှစ်ဆိုတာ ဘာမှမကြာလိုက်သလိုပါပဲ။ မေလ ၈ ရက် ၁၉၉၂ မှာ ကျမထောက်ရက်စေ့နဲ့ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့တယ်။ ပြန်လည်လွတ်မြောက် လာခဲ့တယ်လို့ ပြောတဲ့အခါမှာ အဲဒီတုန်းကလဲ အခု လွှတ်သလိုပဲ န၀တက ၄၀၁ နဲ့ ပြန်လွှတ်နေတဲ့အချိန်ပါ။ ဒီတော့ သူများတွေက ၄၀၁ နဲ့ လွတ်လာ သလားမေးရင် ဒေါသထွက်ရတယ် ။ မဟုတ်ဘူး နှစ်စေ့လွတ်တာလို့ ။ အဲဒီအချိန်တုန်းက ထောင်ကျရင် လျှော့ရက်ပေးတယ် တနှစ် ၂ လရတယ်။ ၁၉၉၅ ခုနှစ်က စပြီး မပေးတော့ဘူး။
ထောင်က လွတ်တဲ့နေ့မှာတော့ မိန်းမထောင်လေးတံခါးရောက်ရင် နောက်ပြန်မကြည့်နဲ့နော် ဆိုတဲ့ ကျန်ရစ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေစကားကို နားမထောင်ဖြစ်ပဲ သူတို့ကို ပြန်ကြည့်ပြီး အပြင်က စောင့်နေမယ် စိတ်ချနော်လို့ ပြန်အော်ပြောခဲ့မိတာလေးကို ခုချိန်ပြန်တွေးမိတိုင်း လွမ်းပါတယ်။ ဘယ်တော့မှ ဒူးမထောက်ဘူး လို့ စိတ်ထဲက အာခံတဲ့ အတွေးကလဲ ထောင်ပိုင်ကြီး ဆုံးမစကားပြောနေချိန်တလျှောက်လုံး တွေးနေတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ငါတို့ နည်းနာ ပြောင်းရမယ် ဆိုတဲ့ အရင်လွတ်သွားတဲ့ သူငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့ စကားကိုလဲ အဲဒီအချိန်မှာ သတိရနေမိသေးတယ်။ ထောင်ထွက်လက်မှတ်ကြီးကို ကိုင်ပြီး ထောင်ဘူးတံခါးက ငုံ့ထွက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ အပြင်လောကကြီးကတော့ ပုံမှန်လှုပ်ရှား သွားလာနေတာပဲ မြင်ရပါတယ်။ ထောင်ထဲမှာ ယုံကြည်ချက်အတွက် အချိန်တွေ ဘ၀တွေကို စတေးနေတဲ့ နိုင်ငံကိုချစ်တဲ့လူတွေ ရှိနေသေးတယ်၊ သူတို့ အချိန်နဲ့အမျှ နှိပ်စက်ညှင်းပန်းခံနေရတယ် ဆိုတာတွေကို အားလုံးကို သိစေချင်နေတယ်။ အဲဒီအချိန်ကလေးမှာ ဒီလိုလူတွေ ရှိနေတာကို အားလုံးသိအောင် လုပ်နိုင်တဲ့ ဘ၀ရောက်ချင်တယ်လို့ တမ်းတမိတာကတော့ ထောင်ကလွတ် လွတ်ချင်း ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ စိတ်ပါပဲ။ ထောင်ကလွတ်တဲ့နေ့က အပျော်ဆုံး ဆိုတာမျိုးကိုတော့ မခံစားရဘူး။
ပုသိမ်ထောင်က မြို့လည်ဈေးနားနီးနီးဆိုတော့ ထောင်ပြင်ကို ရောက်တာနဲ့ ဈေးထဲက ဆိုင်ကိုပဲ တန်းသွားပြီး စားချင်တာ စားဖို့ အားခဲစားပေမယ့်လို့ တကယ်မြိုချလို့ မရဘူး ဖြစ်နေပါတယ်။ ပုသိမ်မြို့လည်က ကျမ သိပ်ကြိုက်တဲ့ ၀က်သားငါးဆုပ်လုံးနဲ့ ခေါက်ဆွဲပြုတ် ဆိုင်က ကျမလဲ ၀င်သွားရော မှာစရာမလိုပဲ ထည့်ပြီးသားလာချပေးတာပါ။ ဘယ်လိုမှ ကုန်အောင်မစားနိုင်လို့ ဘာလဲ အကြိုက်ပြောင်းသွားသလား ၊ ခံတွင်းမတွေ့တာလား လို့တောင် မေးယူရပါတယ်။ အိမ်ရောက်တော့လဲ အိမ်က စားတဲ့ ပေါ်ဆန်းမွှေးထမင်းက ပျော့နေသလိုနဲ့ လည်ချောင်းထဲကနင်နေပါတယ်။ အိပ်တော့လဲ ခြင်ထောင်ထဲမှာ မအိပ်တတ်တော့သလိုလိုနဲ့ အသားမကျတဲ့ ထောင်ထွက်ဘ၀ပါပဲ။ တနေ့လည်လုံး တညနေလုံး စကားပြောလိုက်တာ မရပ်မနားကို ဖြစ်လို့။ အစားမ၀င်တာကတော့ အမှတ်တရပါပဲ။ ထောင်ထမင်းမာမာနဲ့ ဟင်းခြောက်တွေ စားနေရတဲ့ ကျမတို့ရဲ့ လည်ချောင်းတွေက အစာအသစ်ကို လက်ခံဖို့ ငြင်းဆန်ချင်တာလားလို့ စဉ်းစားမိသေးတယ်။
ထောင်က လွတ်လာပြီးမှ ထောင်ဆိုတာ ပန်းပဲဖိုဆိုတဲ့ စာသားကို ပိုသဘောပေါက်လာတယ်။ သံက ပန်းပဲဖိုထဲ ရောက်သွားပြီး မီးနဲ့တွေ့ ထုထောင်းတာခံပြီး သံကောင်းတဲ့ ဓါးတလက်အဖြစ် ထွက်လာသလို သစ်သားဝင်သွားရင်တော့ ပြာဖြစ်ပြီး ထွက်လာမှာပါပဲ။ ထောင်ကျပြီး နိုင်ငံရေးကို လုံးဝ လှည့်မကြည့်နိုင်တော့တဲ့ လူတွေကိုလဲ တွေ့လာရသလို ကျမတို့တွေနဲ့ တွေ့ရင်တော့ နှုတ်မဆက်ပဲ ပြေးတဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် ဟောင်းတွေ ၊ ထောင်ကျဖက်တွေလဲ ရှိလာပါတယ်။ သူတို့ တတ်နိုင်သလောက်လုပ်ပြီး သူတို့ ရွေးချယ်နိုင်တဲ့ လမ်းရွေးချယ်သွားကြတယ် ဆိုပေမယ့်လဲ အဲဒီအချိန်က တရားမရှိတဲ့ ကျမအနေနဲ့ တော်တော် စိတ်နာခဲ့ပါတယ်။
(ထောင်အတွေ့အကြုံအချို့ထဲက မှတ်မိသလောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မေ့ကျန်ကောင်း ကျန်နေနိုင်သေးတာမို့ သတိရတိုင်း ဖြည့်စွက်ရေးသွားပါဦးမယ်။ ထောင်ကလွတ်ပြီးနောက်ပိုင်း အချို့နဲ့အတူ ငြိမ်းချမ်းရေးဒေသမှာ နှစ်နှစ်ခွဲ အတွေ့အကြုံလေးတွေကို အပိုင်း(၃) အဖြစ် ဆက်လက်ရေးသားပါဦးမယ်။အားပေးပါဦးနော်..)
Posted by ခင်မင်းဇော် at 5:08 PM
ခင်မင်းဇော် အတွက်... ခ..... ဆိုတာ
ခရီးက ပြန်ရောက်တော့ စာရေးဖို့ ပြင်နေတုန်း ကိုဂျူလိုင်က တက်ဂ်တယ် ။ (မျက်နှာစာအုပ် ထဲမှာတော့ နေနေရယ် ဟနရယ်ကလဲ ရေးခိုင်းတယ်။) နောက်ကိုဂျူလိုင်က မျက်နှာစာအုပ်မှာ ရေးယုံတင်မကဘူး ဘလော့ဂ်မှာလဲ ရေးတင်တယ်။ ဒီတော့ ရေးပေးရပြန်တာပေါ့။ ဘာရယ်တော့ မဟုတ်ဘူး ပျော်စရာကြီးတော့ ဖြစ်သားး သူများရေးတာလေးတွေလဲ သိပ်ကောင်းတယ်။ ဒါနဲ့ မရေးခိုင်းတဲ့ မြန်မာလိုပါ ဆက်ရေးပေးလိုက်တယ် ။
Khin Min Zaw for K…
1. What is your name : Khin min zaw
2. A four Letter Word : Kiss
3. A boy's Name : Kam
4. A girl's Name : Kaythi
5. An occupation : kicker
6. A color : Khaki
7. Something you'll wear : Kerchief
8. A food : Kele
10. A place : Korea
11. A reason for being late : kept
12. Something you'd shout : kill
13. A movie title : Kwik Stop (2009)
14. Something you drink : Kaluah (Russia)
15. A musical group : Kid Rock
16. An animal : Kangaroo
17. A street name : Kyauk Myaung street
18. A type of car : KIA Careis (US)
19. The title ofasong : Kalifornia
20. A verb : Kidnap
မြန်မာလိုလဲ စဉ်းစားရတာ ပျော်စရာ....
ခင်မင်းဇော် ဖော် ခ...
1. What is your name : ခင်မင်းဇော်
2. A four Letter Word : ချစ်ခြင်းအားဖြင့်
3. A boy's Name : ခိုင်မြဲ
4. A girl's Name : ခက်မာ
5. An occupation : ခြံကြီးဝန်းကျယ်
6. A color : ခရမ်းရောင်
7. Something you'll wear : ခါးပတ်
8. A food : ခေါက်ဆွဲကြော်
9. Something found in the bathroom : ခုံ
10. A place : ချင်းချောင်းခြံ( ရန်ကုန်)
11. A reason for being late : ခိုးထွက်လာရလို့
12. Something you'd shout : ချစ်တော့ဘူး
13. A movie title : ချစ်ချင်းငယ်ပြိုင်
14. Something you drink : ခေါင်ရည်
15. A musical group : ခရမ်းပြာ
16. An animal : ခွေး ၊
17. A street name : ခရေပင်လမ်း
18. A type of car : ခိုင် KIA (US) ဟေးးး စဉ်းစားလို့ ရပဟ။ ချက်ပလက် ကား ပဲ စီးတော့မယ် ဟဟ။
19. The title ofasong : ချစ်သူ့သီချင်း
20. A verb : ချစ်ကြပါ
ဆက်ပြီး tag ဖို့ အတွက် ကျန်နေသေးတာလိုက်ရှာတော့
သမီး ဆုမွန် တို့ ရေးပေးကြနော်...
Posted by ခင်မင်းဇော် at 11:08 PM